Malmö: Dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo tababarayo orodada | Somaliska
Dhalinyaro ku nool magaalada Malmö ayaa loo tababaraya in ay noqdaan orodyahano. Ururka isboortiga MAI ayaa si qaas ah u doortay dhalinyarada Soomaalida si ay u noqdaan orodyahanada mustaqbalka.
Hassan Warsame oo ah 13 sano jir ayaa mar uu ka hadlaayay arintaan waxa uu yiri “Waan dheereeyaa, sidaas asxaabteyda ayaa igu yiri waa sababta aan u imid halkaan” . Dhalinyaradaan ayaa waxaa tababare u ah Rizak Dirshe oo laftiisu noqday jambiyoonka xaga orodka dhowr jeer.
“Waan aaminsanahay mashruucaan, waana mid loo baahanyahay. Waxaa jira dad badan oo awood leh balse aan ogeyn in ay jirto fursadaan” ayuu Rizak Dirshe u sheegay SvT. Soomaalida ayaan lahayn dad badan oo ay kaga daydaan orodka balse waxaa jira 1 qof oo lama ilaawaan ah, Cabdi Bille Cabdi. Mashruucaan laga bilaabay Malmö ayaa la doonayaa in Cabdibillaha labaad uu ka soo baxo.
masha allah waa wax lagu farxo dhalinta halka kawada aniga xita waan rabay lkn hadii maryo asturan laygu taba barayo waan u bahanahay
Asc dhamaantina waa wax lagu farxo somali meel ka muqado insha alaah allene haa ka dhigo kuwi meelkaasta ka muqdaan allene ha ka dhigo kuwi ku jiro diintoda iyo dhaqaankoda iyo xaag kaastana ugu horeyaan
maanta etopia oo dariiskena wey ku jiraaaan xaag kaasta maxaa anagana no didaay ina soo sarno calaankena iyo magaca wadaankena waxaan kalo ku dari lahaay ina badino dadaalka meelkaastana oga muqano ina nahaay dad jeceyl dadkoda iyo wadaankoda horemar sidey uu gari lahaay
ma ahaan ina kaliya ku jirno dagaal iyo qoxooti .
mashaa alllha hassan warsame waxan ku rajeyna guul iyo farxad waliga iyo waliba kuwa kale kula midka ah ayagana sido kale inta kadib ilmaha waxa lobahan yahay markey tareni sameynayan in loso galiyo dharki logu tala galay tasna waxa u samen karo mammayasha dhalay wiilasha plz ku dadala wiilasha yar yar si yee uso noleyan taariikhdi cabdi bile cabdi